Posted by မီးမီးငယ် at 9:43 PM
Anonymous February 27, 2016 7:43 AM
အဲတုန်းက ရန်ကုန်မှာ ရှမ်းထမင်းဆုိုင်တွေ မရှိတော့
ရှမ်းထမင်းဟင်းတွေလည်းကြိုက် အညာစာလည်း ဆီတွေဖယ်ပြီးကြိုက်။
ကုိုယ်သွားလာနေခဲ့စဉ်မှာကို နောက်ပိုင်းဆုို မြို့ ထဲမှာ ဆုိုင်ကယ်တွေနဲ့ တရုပ်ပုံတွေချည့်ဘဲ။ အရင်တုန်း က ကျစ်ဆံမြီးရှည်တွေနဲ့ စက်ဘီးနဲ့ မန်းပျိုလေးတွေ ရှားကုန်ပြီ။
မီးမီးငယ် February 29, 2016 9:40 PM
Anonymous February 29, 2016 1:24 AM
ပုန်းရည်ကြီးကောင်းကောင်းစားချင်ရင် ရွှေစင် တံဆိပ် (ရွာမရပ် ဂွေးချို -ချောက် မြို့နယ် 09-47215062 )ကို ၀ယ်ပါ မမီးရေ၊ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ကျိုပြီး သဲလုံးဝမပါပါဘူး၊ ပုန်းရည်ဖိုပိုင်ရှင်က အမျိုးနီးစပ်ပဲဆိုပါတော့။ ပြီးခဲ့တဲ့လက အိမ်က ၂ ထုပ်ပို့ထားလို့ ခုလက်ရှိတောင် စားနေဆဲ.။
မီးမီးငယ် February 29, 2016 9:41 PM
N3 March 01, 2016 8:39 PM
မန်းလေးက ဈေးချို တို့ရန်ကုန်က ဗိုလ်ချုပ်ဈေးတို့ က တခြားဈေးတွေ (ကုန်စိမ်း ရောင်းတဲ့ ဈေးတွေနဲ့ဖွင့်ချိန် သဘာဝ )
မတူဘူးလို့ထင်ပါတယ်.
တခြားဈေးတွေက မနက်ဆို အစောကြီးဖွင့် ပြီး စားသောက်ချက်ပြုတ်ဖို့ လိုတာတွေ ရောင်းကြ ၀ယ်ကြ... နေ့ လည်း ၉-၁၀ လောက်ဆို ဈေးကွဲပါပြီ.. တချို့ကုန်ခြောက် ရောင်းတဲ့ ဆိုင်တွေပဲ ကျန်ပါတယ်..
ဟိုအပေါ်က ဈေးတွေကတော့ ဈေးရောင်းမယ့်သူတွေက မနက် ဟိုဈေးတွေအရင်သွား ချက်ပြုတ်ပြီးမှ ဈေးဆိုင်သွားဖွင့်ကြတာမျိုး
သူတို့ စီလာဝယ်တဲ့လူတွေကလည်း အဲ့ဒီအချိန်မှ ဈေးလာဝယ်ကြတာလို့ ထင်ပါတယ်.
ဟိုအပေါ်က ဈေးမျိုးတွေကတော့ ရောင်းသူရော.. ၀ယ်သူရောက မနက် ဟိုဈေးတွေအရင်သွား ၀ယ်ခြမ်းချက်ပြုတ်ပြီးမှ ဈေးဆိုင်သွားဖွင့်ကြ.. ဈေးလာဝယ်ကြတာလို့.... ဆိုင်ဖွင့်ချိန်က စပြီး ညနေ ဈေသိမ်းချိန်အထိ တစ်နေကုန်စီကားနေတာမျိုး ထင်ပါတယ်.
မီးမီးငယ် March 02, 2016 8:16 AM
တရံရလာတယ်။ ၂ဝဝဝ ကျပ်စီးကွင့်တွေ